Akụkọ - Standkpụrụ Maka ahịhịa nke ahịhịa ndị China
A na-ebupụkarị ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọgwụ ndị ọdịnala ndị China na-ebupụ. Nke a nwere ike ịbụ eziokwu na ọtụtụ echiche dị iche iche banyere ọgwụ ndị China na-ewepụta na ọgwụ ndị China mepụtara. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọgwụ ndị China na-ewepụta dị iche na mpempe decoction ọdịnala ndị China. Ọ bụ ọgwụgwọ ọdịnala ndị China, n'ihi na enwere ọtụtụ kemịkal kemịkalụ na usoro nke ịdebe ọgwụ ndị China. Nke a bụ mmetụta na - enweghị ike ị nweta mgbe agwakọta ọgwụ ọdịnala nke ndị China. N'ezie, ụlọ ọrụ Guangdong Yifang nyochachara ọgwụ granulu ọgwụ ndị China gosipụtara na ndị na-emepụta ọgwụ ndị China nwere ike ijigide ọtụtụ njirimara nke ọgwụ ndị China. N'otu oge ahụ, site na ọganihu nke teknụzụ, ihe ndị dị egwu nke ọgwụ ndị China apụtala nke ọma. Ọkọlọtọ nke ọgwụ ndị China na Chinese Pharmacopoeia bụ Maka ntụaka, anyị ga-enwe ike ịhazi ngwa ngwa ụkpụrụ ụkpụrụ mmalite nke ọgwụ ndị China na-ezute njirimara nke ọgwụ ndị China ma ụwa nabatara ya, ma nọgide na-emeziwanye na usoro mmejuputa iwu. Nke a dịkwa n’usoro iwu nke mmepe botanical ugbu a.
Nhazi na mmụba nke ihe ndị na-emepụta ọgwụ ndị mepụtara na Chinese na-adịkarị n'azụ. Site na mmejuputa na agam n’ihu nke atụmatụ mmụba ọgwụ nke obodo m, amalitela usoro ọkọlọtọ ọgwụ mba, ebumnuche nke iwu usoro iwu ọgwụ na-agawanye ngwa ngwa, ọrụ njikwa usoro ọgwụ ahaziri ahazi ma ka mma. Otú ọ dị, ọkọlọtọ nke ọgwụ ndị China na-emepụta ọgwụ ka dị n'azụ, ọkachasị n'akụkụ ndị a:
① ①kpụrụ adịghị eguzobe. Mkpụrụ ọgwụ ndị China bụ ihe ndị dị mkpa maka mmepụta nke ọgwụ patenti nke China. Dabere na ọnụ ọgụgụ, ihe dịka 29.8% nke ọgwụ patent China na-eji ọgwụ ndị China eme ihe, mana a ka nwere ụfọdụ ọgwụ ndị China na-ewebeghị ụkpụrụ mba. N'ihi enweghị ụkpụrụ iwu, ụkpụrụ a na-achọkarị na ụkpụrụ ụlọ ọrụ na-anabatakarị na mmepụta na ọrụ azụmaahịa, yana ụkpụrụ ogo dị na nkwekọrịta ahụ bụ ihe ndabere maka nnyefe ngwaahịa, yana usoro nyocha ngwaahịa a na-agbagwoju anya.
②kpụrụ ahụ ezughị okè. Ngwongwo zuru oke zuru oke bụ ihe ndabere maka njikwa njikwa ogo nke ọgwụ ndị China. Agbanyeghị, n'ihi nkwupụta agbatịpụtara ụkpụrụ maka ụfọdụ ọgwụ ọgwụ ndị China, ihe ọkọlọtọ ahụ ezughị oke. Iji maa atụ, ụfọdụ ọgwụ ọdịnala ochie nke ndị China wepụsịrị ụkpụrụ enweghị oke ọgwụ ndị na-egbu ihe na ihe mkpebi siri ike, ụfọdụ anaghị enwe ụkpụrụ nyocha maka ihe inyeaka, ụfọdụ anaghịkwa enyocha ego microbial.
Nmehie na ụkpụrụ. Enwere ọtụtụ ụkpụrụ maka ọgwụ ndị China na-ewepụta, yana enweghị nnabata na aha, usoro nkwadebe, njirimara, yana nyocha. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ọgwụ ọdịnala ndị China nwere otu aha ma ụzọ nkwadebe dị iche iche. N'iwere nsonye nke Scutellaria baicalensis Georgi dị ka ihe atụ, ọ pụtara ugboro iri na abụọ na mbipụta 2010 nke Chinese Pharmacopoeia na "Nkọwapụta nke Ọgwụ Na-ahụkarị nke China". , "Uru pH uru tupu ihicha", "Ngwọta maka ịsa ngwaahịa crude" na usoro usoro igodo ndị ọzọ na-emetụta ogo ngwaahịa emechara dị iche, nke dị mfe ịkpata ọgba aghara na mmepụta na ojiji.
Standard Ọkwa dị ọkọlọtọ ahaghị nhata. Levelkpụrụ ọkwa nke ọgwụ ndị China na-emepụta ọgwụ kwadoro n'ụdị ọgwụ ọhụrụ ma tinye ya na Chinese Pharmacopoeia dịtụ elu. Otú ọ dị, ọgwụ ndị ọzọ a na-enweta n’ọgwụ ndị China na-enwe nsogbu ndị dị ka nkà na ụzụ na-ezughị ezu na ụkọ nkà na ụzụ. Na mgbakwunye, imirikiti ndị na-emepụta ọgwụ ndị na-ewepụta ọgwụ ndị China bụ obere ụlọ ọrụ nwere ọkwa teknụzụ na adịghị mma nke ọma. Ha anaghị adịkarị ebuli ma nyochaa usoro mmepụta nke ngwaahịa a nke ọma, na enweghị mmepe mmepe miri emi, na-ebute oke ụzọ teknụzụ nrụpụta dị ala maka ewepụtara ọgwụ ndị China. Mpaghara asọmpi dị ala na nke aghara.
⑤ A naghị ekpochapụ ọkọlọtọ. N'ihi enweghị ụzọ iji nyochaa mmejuputa ụkpụrụ nke ọgwụ ọgwụ ndị China na-ewepụta, ụfọdụ ụkpụrụ ọgwụ ndị China wepụtara "na-adị ndụ mana ha anaghị anwụ anwụ", nke mere na ụfọdụ ụkpụrụ ndị emelitere ma ọ bụ degharịa kemgbe ọtụtụ afọ ka na-arụ ọrụ, na enwere mkpa dị ngwa iji guzobe usoro mkpochapụ usoro
Post oge: Sep-14-2020